CABASHO TOOS AH, REYSULWASARE. | Saadaal Media
CABASHO TOOS AH, REYSULWASARE.
KU: Reysulwasaare cali maxamed kheyre.
Mudane R/wasaare waxan kugu salaamay salaanta islaamka.
Mudane R/wasaare waxan ah sarkaal katirsan CXD mudo 40 sano ah. Waxan katirsanahay Ururka 60aad oo qaabilsan Amniga xarunta madaxtooyada qaranka oo xafiiska R/wasaarahu kamid yahay.
Magaceygu waa G/sare Xaashi Bulxan Maxamuud. Horeyna u ahaa Darawalkii Marxuum M/weyne Maxamed Siyaad Bare.
Mudane R/wasaare, waxaan la soo shaqeeyey 5 madaxweyne oo kamid ah 9kii Madaxweyne ee dalkeena soo maray oo ugu dambeeyo madaxweyne Maxamed C. Maxamed (Farmaajo).
Sidasoo kale waxan lasoo shaqeeyey 8 R/wasaare oo aad adigu ugu dambeyso.
Mudane R/wasaare anigoo garankara nidaam xafiiseedka dowladeed, hadana waxa igu qasbay inan qoraalkaan furan halka kuusoo mariyo wax sahlan maahan, waxaase jira daruufo igu khasbay, lagama maarmana iiga dhigay! Talaabadaan. Sidas darteed mudane R/wasaare waxan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad hoos u fiiriso cabashadeyda, intii awoodada dastuuriga ah aad wax igala qabato.
Mudane R/wasaare, sanadkii 1982 ayan dhul ku yaalay degmada Cabdicasiis ee G. Banadir oo si sharci ah la ii siiyey mulkiyadiisa waxan ka dhistay Guri dhagax ah bilowgii sanadkii 1983dii. Dhismaha guriga oo wali aan rasmi u dhamaan aya waxaa dhacay burburkii coladahii dalka. Dadkuna waa kala qaxay.
Maadaama an nafteyda ku kalsoonaa, oo aysan jirin qof iyo koox gooni ah oo aan godob iyo dambi ka qabo, anigu meelna ugama bixin Xamar. Intii burburku jirey oo dhanna waxan ku sugna Muqdisho. Waxana ku dhex noolaa gurigeygii aan dhistay oo qeyb ka mid ah wali ay qabyo tahay.
Maalmo & sanado badan oo dalkeena dhexdiisa #Hayb qabiil iyo isir la isku dilayey, anigu waxan si nabad iyo xornimo buuxda ah ugu dhexnoolaa gurigeyga, mana jirin qof ii muujiyey colaad haba yaraatee! Dadka qaarkiis ieny helaan fursad noocaas xiligaas wey adkeyd allaah ayaan ku mahdinayaa.
Jalle R/wasaare, waxaa nasiib daro iyo qalbijab weyn igu ah maanta, in waqti kamid ah xilliyadii dowladnimo soomaaliya ay yeelato loogu hanka weynaa, si dhac bareer ah & awood sheegasho qaawan la iigu qabsadey sanadkii 2014kii gurigeygii aan intaas kusoo dhexnoolaa oo Soomaali oo dhan ii wada taqaano,
Anigoo ku kalsoonaa hananka dowlanimo, sharciga dhowraya, astaanta iyo darajada qaranka ee aan xirnahayna qadarinaya, ayan go,ansaday inan Sharciga iyo hay’adaha Garsoorka qaabilsan u cawdo, oo aan ayaga magangalo intii aan Qabiil iyo qabyaalad maciinsan lahaa.
Waxaan waayey cid toos ah oo an sharciga hortiisa wada istaagno oo gurigayga igula dacwineysa. Hay’adaha dowliga ah kuwooda garsoorka iyo amniga ku shaqo leh ee heer degmo & gobol intaba waxaan u hortagay Cabasho, balse kama helin wixii aan qaxa ugu lahaa ee muwaadinimada & sharciga dalku ii ogolaanayey.
Munae R/waase; waxaa wax laga naxo aha, qaranimada wajigabax ku ahaa ayadoo aan lahyn ruux si rasmi ah sharciga hortiisa iigula mudaceysa, in qaar kamid ah madaxdii garsoorka loo igmaday ay qareen u noqdeen dhinacii kale oo aan is haysaney ayagoo adeegsanaya awoodda dowladnimo ee xafiisyada Maxkamada gobolka iyo tan xafiiska Xeer ilaalinta dalka.
Sidaas darteed, waxan doorbiday inan u gudbo maxkamadda Sare ee dalka, oo aan hoos dhigay cabashadeydii. Bartamahii sanadkii 2015, kadib;
(a) Markuu dhageystay dacwad qareenkeygu hor geeyey maxkamada sare.
(b) Markuu arkey sida aan sharga waafaqsaneyn ee Maamulka gobolka banadir iyo xafiiska kuxigenka xeer ilaaliyaha qaranku u maamuleen habka gurigyega lagu boobayo.
(c) Markii ay u caddaatay in dacwada gurigeygu aan la marin qaanuunka saxda ahaa iyo xeerarka garsoorka; Guddomiyahii maxkamada sare ee xiligaas, Avv. Caydiiid ilko xanaf, wuxuu soo saaray;
1. Cukun maxkamadeed oo uu ku jabinayo dhamaan go’aanadi ay soo saareen maamulka gobolka iyo xafiiska xeer ilaalinta (kuxigeenka x.ilaaliyaha) ee xiligaas jirey iyo
2. Wuxuu abray in dacwada gurigaan loo celiyo maxkamadda sharciga u leh iney qaado dacwadaas.
#KADIB #MAXA #DHACAY?
Inkastoo Maxkamada saree dalku ay soo saartay go’aan, balse lama tixgelin oo waa la baalmaray sharcigii. Waxaan dhacday bartamihii sanadkii 2016 in gurigeygii dhexdiisa la igu soo weeraray ayadoo maleeshiyo qabiil la adegsanayo. Dhaawac iyo dhimashana ka kadhalatay weeraarkas.
Weerarkaas qaawan oo la igu soo qaaday waxa soo farogalisey dowladdii dhexe ee talada dalka haysey. Waxaa la i dulkeenay ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida (NABAD SUGID ) waxaana la igu wargeliyey in gacan-kuhaynta guriga ay xukumaddu la wareegeyso, dhacadadii weerarka baaritaan lagu sameynayo, kadibna dacwada guriga dowladdu horgeyneyso hay’adaha qaabilsan.
Mudane R/ anigoo maslaxda tixgelinaya, anigoo u hogaansamyey awaamiirta madaxda qaranka oo ay ugu horeeyaaan Madaxweynahi iyo R/wasaarihii qaranka ee waqtigaas, ayaa waxaan aqbalay soo jeedintaas, waxana aaminsanaa in cadaalad iyo Garsoor xalaal ah aan helaayo.
Waa ayaan darro labaade, sidaan jawaab iyo tilman cadaalad ku dhisan u sugaayey, waxa iigu xigtay idaacadaha oo tabinaya in gurigeyga loo xukumay laguna wareejiyey labo dumar ah oo sheeganayey in gurigaan aan ka dhacay sanadkii 1993, taaso qofka garashada fiyoow aan suurogal ku ahayn marka la fiiriyo, xaalada waqtigaas ka jirey Xamar iyo waliba marka loo eego dadka aan haby ahaan abtirka ku raaco.
Laga soo bilaabo waqtigaas 2016 ilaa maanta oo 2019 la joogo, waxan la’ahay oo aan wali baadigoobayaa inan helo garsoor cadaalad ku dhisan, sharciaga dalkeena u yaala iigu cadli fala, si sinaan ahna aniga iyo cidii i haysata noogu garqaado!
Jaalle R/ wasaare ogow 2016 ilaa iyo maanta oo 2019 ah waxan kiro ku deganahay guri 200 oo tilaabo/mitir u jira gurigeygii aan dhistay. Dhaqaalaha ay leeyahayna waa mushaarka ciidanka oo kaliya. Halka gurigii aan ubadkeyga u dhistayna uu nin xoog ku hayta kaqaato dhowr kun oo dolar oo kiro ah bishiiba.
Waxad tahay Aabbe soomaaliyed oo awlaad alle siiyey, waxaan dareemayaa inaad qiyaasi karto murugta iyo xanunka ubadkaada haysan lahaa hadii sidaas lagu sameeyo, ayan dareemayaan iney cadaalad darro ku haysato dowladoodi iyo qaraankii Aabohood waqtiga badan usoo shaqeynayey oo ay wax fiican ka filayeen!
Waa kaas dareenka aan qabo oo aan 5 sano kaligeen dariska la ahay, cid iiga maciintana aan wali goobayo.
Waa taas boogta iyo xanuunka dowladdeydii aan direyska u xirnaa hoosteeda la iigu geystay walina aan xulayo cid i dhageysata oo hal saac kaliya Caddaalad igu maamusha.
Waxan hadaba kaa codsanayaa inaad tixgaliso xogta iyo cabashadaan ii gaarka ah, igu garab sii inaan Cadaalad helo, aniga iyo ubadkeygana aanan Rajobeel qaran ku sii jirin sanado kale oo cimeigeena kamid ah haddii Cimrigeenu sii waaro.
Wad ku mahadsantahay inaad waqti siisey sidii aad u daalacan laheyd qormadaan, waxana kaa dhowrayaa jawaab dabiib u noqonkarta aniga & kumanaan kale soomaaliyed oo ay xaaladaas ama kuwo ka sii xun ay haystaan!
G/sare Xaashi Furre.